Jeans mikotrika, izay azo atao amin'ny tanany manokana, azo antoka fa zava-mahatalanjona. Indrindra raha efa nalaina tsara ilay sary ary mifanaraka tsara ny sary. Miseho amin'ny taona 80 ho toy ny akanjo ho an'ny pelaka, amin'izao fotoana izao izy ireo dia eo amin'ny saika akanjo rehetra ary mifangaro amin'ny fomba rehetra.
Ao amin'ny jeans mikotrika, ny ankizivavy rehetra dia hijery sexy sy seduction. Zava-dehibe ny fisafidianana ny nofinofy nofatorana noforonina mba hamaritana tsara ny karazana tarehinao. Ny ankizivavy manana akanjo lava dia hampiasa ny jeans ho tapaka miaraka amin'ny sombin-damina kely ambany kokoa izay manosika ny fahanginanao sy mameno azy kokoa. Tsy tokony ho eo amin'ny zanak'omby raha toa ka ankizivavy petite ianao na manana tongotra mandoza. Mety hampihena sy manitatra ny tongotrao izany. Ireo tompon 'ny saribakoly kely dia afaka misafidy mora foana modely. Ohatra, ireo jeans nopotserina kely dia hanasongadina ireo silhouettes mahazendan'ny vatanao.
Raha ny loko, dia ao amin'ny varavarankelim-pivarotana dia hahita karazan-damosina. Ary tsy mila manga izy ireo. Misafidiana klasika - mainty na fotsy na mavo. Ho an'ny fanandramana rehetra izay anananao herim-po fotsiny.
Inona no tokony hatao eo ambany elatrao?
Ny "fanasongadinana" ny jeans mikotrika dia ny manokatra ny endriky ny tongotry ny vehivavy. Noho izany, na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona, aza manao pantyhose na kiraro amin'ny jeans.
Rehefa mampifangaro akanjo, dia zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny sary dia tokony handanjana, ary ny tsotsotra kokoa amin'ny jeans, ny mora kokoa dia tokony. Ohatra, fitambarana tsara ho an'ny jeans toy izany dia avy amin'ny T-shirt sy bala tsotra. Mifanohitra amin'izany, ny sombin-kaominina ambany indrindra dia ahafahana misafidy loko mamirapiratra sy mamirapiratra.
Ankoatra izany, afaka manamboatra fitambarana ianao amin'ny alàlan'ny satroka simenitra amin'ny endriky ny vatolampy sy ny akorandriaka. Akanjo hoditra, tsilo amam-bozaka, rojo, vovony, toy ny T-shirt efa tonta - izany rehetra izany dia hahatonga ny sarinao ho malaza sy mamitaka.
Raha mifidy akanjo maotina ianao, tsy dia mateza loatra, ary satroka kely misy sombin-tsotsa kely, dia hahazo fitafy malaza amin'ny vehivavy ianao.
Ny sarin'akanjo manify dia azo ampiasaina hamoronana sary isan'andro. Mieritreritra izy ireo fa tonta, akanjom-boninahitra na lobaka amina karavato misy loko - ho safidy ho an'ny andro tsirairay.
Kiraro ho an'ny jeans
Ireo tia amin'ny endrika tsy mahazatra dia afaka mampifandray ny jeans miaraka amin'ny loko volombatolalila tsy miandany mba handanjalanjana ny fijery manjavozavo amin'ny sambo ary hahomby kokoa. Ny endrika jeans, ny kiraro, ny lofers, na ny moccasins dia tsara tarehy. Ankoatra izany, ny kiraro misy kofehy na kapa amin'ny kirany dia hanome anao vehivavy. Indrindra raha ny tampony dia jiro manga, akanjo na akanjo, izay hanome romanticism ny sarinao. Fenoy ny antontan'isa dia hanampy ireo akanjo maotina amin'ny fanandramanao sy ny fomba.
Photoshoot amin'ny maraina
Ny lokon'ny melon pantyhose
Ny sarin'ny mpandraharaha iray
Ahoana no hianaranao manamboatra sôsily?
Ahoana ny tokony hatao amin'ny fehikibo vavy?
Hevitra ho an'ny sary fitifirana amin'ny ririnina
Fa inona no fihinanan-jazakely?
Photoshoot amin'ny fomba fitenenana
Amin'ny zavatra tokony hosoloana - sary 45 modely ho an'ny tsiro rehetra
Amin'ny inona no manao akanjo beige?
Fiainana eo ambanin'ny teny faneva: afisy mibaribary ao amin'ny USSR, izay hahatsapa ho tsy mahazo aina!
Lecho amin'ny alika kely amin'ny ririnina
Olivanin'ny oliva - votoatin'ny kaloria
Spathodea: hazo tulipan'i Afrika
Vokatry ny sigara - fambolena sy fiahiana
Andriamanitra avy amin'ny Slave Velez
Mifanila amin'ny lalana
Fashion short hair cuts 2015
Monica Lewinsky dia nanenina ilay sarimihetsika vaovao mikasika ny fifandraisany amin'i Bill Clinton
Mainty ny akanjo mamirapiratra
Feng Shui Kitchen - Fitsipika
Ahoana no hianaranao hanoratra amin'ny fomba tsara tarehy amin'ny sora-tanana manonona azy?
Kavasshenye aubergines - sakafo mahasalama sy tsy mahazatra ho an'ny fanomanana snacks
Takelaka latabatra fanala
Sedum - fambolena sy fiahiana
12 sangan'asa momba ny fitaovana, izay tsy ahafahanao mieritreritra!
Fitaterana any Malta